यसरी चिन्न सकिन्छ दैनिक शारीरिक सम्पर्क गर्ने महिलाहरु – Medianp
यसरी चिन्न सकिन्छ दैनिक शारीरिक सम्पर्क गर्ने महिलाहरु
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०७५०८:२७0
बिहे पछि एउटा नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त रु उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ।
शरीरका यी अंगहरुमा पटक पटक हात लगाउने बानी छ भने छोड्नुहोस
महिला हरु यौन इच्छा कसरी प्रकट गर्छन् ?
यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौन सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा बढी थियो । यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो । नेपाल समाचारपत्रबाट
क्रोएसियाली खेलाडीले खुसी मनाउँदा फोटोग्राफर मारमा !
यस्तो आयो चलचित्र ‘झमकबहादुर’ को पोस्टर
पिसाब लागिरहेमा के गर्ने ?